Uvavanyo lombane we-dielectrical emanzini - iYuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Uvavanyo lwevolthi yombane kumanzi amanye abizwa ngokuba kuvavanyo lokuguga kombane ngaphantsi kwamanzi ukulinganisa ukuthembeka kunye nokunxibelelana kwezixhobo zokugqobhoza intambo ngombane ophantsi, ophakathi kunye nophakamileyo emanzini. Siqhubeka nolu vavanyo kwizibophelelo zokugqobhoza ezinamandla asezantsi, ii-lugs zekhebhu ezifakelweyo kunye neekepusi ezigqityiweyo.
Olu vavanyo lilinganisa iimeko zemozulu zemvula eqhubekayo kunye nokufuma okuphezulu. Sibeka ii-conductor ezifakelweyo kwitanki ebonakalayo enesixa esifanelekileyo samanzi, emva koko samisela umbane ophezulu kunye nokulinganisa unxibelelwano. Umlinganiselo wevolthi kunye nexesha linamaxabiso ahlukeneyo ngokwemigangatho ye-EN 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 yezixhobo zokuhambisa umbane. Ngovavanyo lokulinganisa ukuqinisekisa inqanaba eliphezulu lokugquma kwezihlanganisi zombane phantsi kwevolthi, imithwalo yombane, kulingisa ixesha lokusetyenziswa.
Imigangatho yethu yovavanyo esekwe kwiCENELEC, N 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 kwaye sisebenzisa ukulandela imigangatho yovavanyo kwiimveliso ezintsha ngaphambi kokumiliselwa, kunye nolawulo lomgangatho wemihla ngemihla, ukuqinisekisa ukuba yeyethu Umthengi unokufumana iimveliso ezihlangabezana neemfuno zomgangatho.